सेबू, फिलिपिन्स मा अन्य पर्यटन विकल्प | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | फिलीपींस, मार्गदर्शकहरू
म Tuesday्गलबार हामीले बोरासेको बारेमा कुरा गर्यौं, फिलिपिन्सको एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक। यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको मक्का हो र हामी मनिलाबाट सूर्य, समुद्र तट, तातो समुद्र र रमाईलोको गन्तव्यमा जानको लागि सबै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछौं।
तर यदि तपाईले फिलिपिन्सको नक्सालाई राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो पनि छ जेबू। यो मुख्य टापु र यसको वरपर १ 160० भन्दा बढी टापुहरू मिलेर बनेको भिसासको मध्य क्षेत्रको एउटा टापु हो। सेबु, राजधानी, यो फिलिपिन्सको सब भन्दा पुरानो शहर हो र आज यो एक आधुनिक, जीवन्त र उच्च विकसित शहर हो। र यदि तपाईं त्यो प्याराडिसाइकल समुद्री किनारमा थप्नुहुन्छ ... राम्रो, तपाईं फिलिपिन्स मा अर्को पर्यटन विकल्प छ! तपाईं अन्तमा भन्नुहुनेछ कुन मनपर्दछ।
1 सेबू, फिलिपिन्स को पहिलो राजधानी
2 सेबूमा गर्न को लागी चीजहरू
सेबू, फिलिपिन्स को पहिलो राजधानी
स्पेनिशको आगमन हुनु भन्दा पहिले यी टापुहरू सुमात्राका राजकुमारले नियन्त्रण गरेको राज्य थियो। स्पेनिश १ XNUMX औं शताब्दीको शुरुमा आइपुग्छन् र त्यसबेलादेखि तिनीहरूको इतिहास पश्चिमी पुस्तकहरूको अंश हो।
मुख्य टापु, सेबु, लामो र साँघुरो टापु हो जुन उत्तरबाट दक्षिणमा १ 196 kilometers किलोमिटर दौडन्छ र यसको फराकिलो बिन्दुमा यो मुश्किल २० माईल छ। यसमा पहाडहरू र पहाडहरू छन्, यद्यपि धेरै उच्च छैन, र यसका वरिपरि पनि छन् सुन्दर समुद्र तट, कोरल रीफहरू, अन्य टापुहरू र पानीमुनि जीवन शानदार। यसलाई पूर्ण रूपमा रमाइलो गर्न तपाईंले सुख्खा मौसममा जानु पर्छ, जुन डिसेम्बर को बाहिर, र आंधी मौसम।
मार्च र मेको बीचमा यो तातो छ र यो सजिलैसँग 36 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्दछ, तर ऊ अनुमान गर्दछ कि वर्षभरि थर्मल चाप २ 34 र º 25 डिग्री सेल्सियसको बीचमा हुन्छ। संक्षिप्तमा, कम मौसम मे र जुन बीच र सेप्टेम्बर र अक्टुबर बीचको तापमान २ 32 र º२ डिग्री सेल्सियस र वर्षाको बीचमा हुन्छ। उच्च मौसम अप्रिल, मे र जून अधिक ताप र बतासको साथ हो, तर थोरै वर्षा।
कम मूल्य, कम पर्यटन र एक र अधिक पर्यटन मा अधिक प्रस्ताव, अधिक सूर्य, अधिक पार्टी र दोस्रो मा उच्च मूल्यहरु। त्यहाँ एक उच्च उच्च सीजन छ जुन क्रिसमस, नयाँ वर्ष, चिनियाँ नयाँ वर्ष र इस्टर हो। उसले गणना गर्दछ कि मूल्यहरू त्यसपछि १० देखि २%% बढ्छ।
सेबूमा गर्न को लागी चीजहरू
यसको प्राकृतिक आकर्षणहरू पछाडि, जुन हामी पछि हेर्नेछौं, शहर आफैंले नै आकर्षक छ र हामी यसलाई केहि दिन समर्पित गर्न सक्छौं। क्रिश्चियन र स्पेनिश प्रभाव हरेक कुनामा चर्च, क्रस र सडकको नामको साथ देखिन्छ। हो म्याग्लान क्रस, सान्तो निनोको माइनर बेसिलिका, म्याग्लानेस र कोलोन स्ट्रीटको अभयारण्यउदाहरण को लागी, शहर मा सब भन्दा पुरानो।
तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ फोर्ट सान पेड्रो, महानगर क्याथेड्रल, सेबु टाओस्ट मन्दिर, जेसुइट हाउस, १ th औं शताब्दीको पुरानो र सुरुचिपूर्ण कासा गोरोर्डो र यस रूपमा चिनिने साइट टप्स जुन बुसैमा छ र शहरको केन्द्रबाट १२० किलोमिटर एक शानदार १º०º दृश्यको साथ एक सुन्दर दृश्य बाहेक अरू केहि छैन।
शहर वरिपरि घुम्न तपाईं तीन यात्रुहरूको क्षमताको साथ एक tricycle प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सात फिलिपिन्स पेसो प्रति किलोमीटर चार्ज गरिन्छ। त्यहाँ पनि मल्टीटाक्सिस छ र जीपनी धेरै रंगीन क्लासिक ट्याक्सी र बसको अभाव छैन। सबै चीज स्थानीय मुद्रामा भुक्तान गरिन्छ, केवल ठुलो रेष्टुरेन्टहरू र होटलहरूले क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्दछन्।
अहिले, सिबुको समुद्री तटहरूका बारेमा के हुन्छ? यदि तपाईं केहि दिन बस्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम विकल्प भनेको राजधानीबाट धेरै टाढा सर्दैन। उनको अगाडि छ म्याकन टापु, एक सिफारिश डाइविंग गन्तव्य र प्राकृतिक सौन्दर्य। यो पनि भनिन्छ लापु लापु y यो दुई पुलको साथ शहरमा जोडिएको छ। यो व्यस्त टापु हो र सर्वश्रेष्ठ डाइभि sites साइटहरूको क्षेत्रमा।
यहाँ म्याकानमा छ जहाँ रिसोर्टहरू केन्द्रित छन् र मनिला वा कोरिया वा ह fromक excबाट भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू सिधै आउँछन् किनकि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ। म्याटेन एउटा गेटवेका लागि एक उत्कृष्ट कोरल टापु हो। यसको वरपर तम्बुली र कोन्तिकी चट्टानहरू र हिलुटुgan्गन टापु समुद्री अभयारण्य हो। समुद्री तट र डाइभिiving, स्नोरक्लि। र डु boat्गा सवारीहरू भनेको यो प्रस्ताव गर्दछ।
जब यो आवासको कुरा आउँदछ, त्यहाँ बजेट होटेलबाट ठाउँहरू सम्म सबै कुरा हुन्छ जुन कन्ड्या नेस्ट ट्राभलर लक्जरी सूचीमा हुन योग्य छ। त्यो याद गर्नुहोस् म्याटान सेबुबाट एक घण्टा भन्दा कम र मनिलाबाट minutes 45 मिनेट जति छ अरू केहि हैन। तपाईं सीधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ नरिपाबाट जापानमा, इन्चियोन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर वा ह Hongक Kongमा। तर म्याकन टापुमा नजोडीकन त्यहाँ सिफारिस गरिएका समुद्री तटहरू छन् र केहि अन्य टापुहरूमा।
को क्यामोट्स टापु त्यहाँ तिनीहरू चार छन्, तुलng्ग, प्याजियन, पोरो र पोन्सन, र ती सबैमा उत्कृष्ट समुद्र तट र होटेलहरू छन्। उही Badian टापु जहाँ एक शानदार निजी रिसोर्ट छ। सेबु र ला लेइट टापु बीचमा सुन्दर छ बोहोल टापु, राम्रोसँग परिचित र उत्कृष्ट समुद्र तटहरूको साथ।
La मलापास्कुआ टापुमाछावालाहरूका टापु, शीर्ष गन्तव्यहरू मध्ये एक हो र सबैभन्दा गोप्य मध्ये एक हो Sumilon टापु। पहिलोमा, डाइभि the भनेको निरपेक्ष राजा हो, यद्यपि यो पर्यटनको लागि त्यति विकसित गरिएको छैन, सायद अझ बढी आकर्षण हो। त्यहाँ कुनै एटीएम छैन, होटलहरू गाउँलेहरूको सडकको बीचमा अवस्थित छन् र न त यूरो न त डलर स्वीकारिन्छ।
Bantayan यो ईडेन टापु हो जसमा क्रिस्टल स्पष्ट पानी र सेतो समुद्र तटहरू छन्। यो फिलिपिन्सको चारवटा शताब्दीका सब भन्दा पुरानो चर्चहरू मध्ये एक हो र त्यहाँ धेरै होटल र रिसोर्टहरू छन् जसमा तपाईं महिनौं गुमाउन सक्नुहुन्छ। मूल्यहरु? $ 60 र माथिबाट।
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, फिलिपिन्सको यस भागमा भएको प्रस्ताव बोराकाइ भन्दा भन्दा बढी छ। यहाँ तपाइँ आफैंलाई धेरै व्यवस्थित गर्नुहोस् किनकि प्रत्येक टापु एक गन्तव्य हो। ती सबैसँग होटेलहरू छन् र सबै सबै कम वा कम समान प्रस्ताव गर्दछन्, तर यो मलाई लाग्छ यदि तपाइँ फिलिपिन्समा पौंडी खेल्नु, स्नोर्कलिंग र डाइभि like मनपराउँनुहुन्छ भने, सबैमा राम्रो गन्तव्य सेबु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » सेबू, फिलिपिन्समा अन्य पर्यटन विकल्प
फ्रान्स मा जाडो मा के गर्ने
एग्रीगन्टो (SICILY): प्राचीन ग्रीसको लागि यात्रा